मलेसियाबाट कस्का लागी सिन्दुर पोते लिएर आउँदैछन ज्ञान ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मलेसियाबाट कस्का लागी सिन्दुर पोते लिएर आउँदैछन ज्ञान ?
काठमाण्डौ- पछिल्लो समय प्रबासबाट कला साहित्यका क्षेत्रमा लामबद्ध हुने प्रतिभाको संख्या बढ्दै गएको छ । धन कामाउने ठुलो सपना बोकेर श्रम बेच्न खाडि पुगेका युवाहरुमा जति सुकै दुख कष्ठ आईपरे पनि नेपालको माया ,मोह कहिलै कम हुदैन ।
यसको ज्वलन्त उदारहण हुन् । खाडीबाट गित संगितका क्षेत्रमा उदाउने नया कलाकारहरु । सोही भीड मा लामवद्ध छ्न् । प्युठानका गायक ज्ञान सुनार मलेसिया लाई कर्म थलो बनाएको पनि झन्डै ५ बर्ष कटीसकेको छ ।
संगीतमा अनौपचारीक रुपमा साधनामा लागे पनि औपचारीक रुपमा गीत रेकर्ड भने गरेका थिएनन ज्ञान सुनारले । देश परदेश म्युजिक प्रालीको संयोजनमा केही दिन अगाडी मात्रै मलेशीयामा तिम्रो सिन्दुर बोलको गीत रेकर्डिङ गरीसकेका छन सुनारले ।
जसमा गायीकाको स्वर रेकड पश्चात नै गीतलाई बजारमा सार्बजनिक गरीने पनि सुनारले बताए । गीतको बजारीकरणको जिम्मा भने देश परदेश म्युजीक प्रा.लिले गर्ने भनेसंगै पनि सुनार आफ्नो गीतले मिडियामा राम्रो ठाउ पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन ।
उनले भने देश परदेश म्युजीक प्रालीले सर्जकलाई विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट सर्जकलाई चिनाउन लागी पर्दछ म ढुक्क छु ।
भारतका चर्चित हास्यकलाकार कपिल शर्माको जिन्दगी थप जटिल बन्दै गएको..
विवाहित नायकसँग सम्बन्ध राखेपछि यी नायिका यस्तो हालत, नायक पत्नीको जोडदार थप्पड
विवाहित सहकर्मीसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा भारतीय टेलिभिजन जीटीवीको चर्चित सो..
कपिल विवादले लियो डरलाग्दो मोड, डा. गोलाटीले दिए यस्तो सल्लाह
भारतका चर्चित हास्य कलाकार कपिल शर्मा जिवनमा अहिले सम्मको सबैभन्दा..
श्रीदेवी काण्डमा मनीष मल्होत्राले गरे नयाँ खुलासा.., भन्छन् त्यस रात कुराकानी भएको थियो
सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा श्रीदेवीका धेरै नजिकका साथीको रुपमा चिनिन्छन्..
बलात्कारीलाई कारवाहीको माग गर्दै अक्षय र प्रियंकाले यसो भने
जम्मू कश्मीरको डरलाग्दो ‘कठुआ रेप काण्ड’ का बारेमा भारतका चर्चित..
तराईमा रहेको दाईजो प्रथाको कथामा निमार्ण भएको चलचित्र भोरको हेटौडामा..